Tanjon’ny Fanontàna 2018: Mila Tantaranà Fiarahamiasa Eo Amin’ny Sisintany Bebe Kokoa Any Azia Atsimo Isika · Global Voices teny Malagasy
Tanjon'ny Fanontàna 2018: Mila Tantaranà Fiarahamiasa Eo Amin'ny Sisintany Bebe Kokoa Any Azia Atsimo Isika
Voadika ny 23 Febroary 2018 15:24 GMT
Ampahany amin'ireo ekipa GV ao Azia Atsimo nandritra ilay Fihaonambe tany Sri Lanka. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Mandritra ny taona 2018, hanao fanandramana fomba vaovao eo amin'ny asantsika ireo mpanonta avy ao amin'ny efitrano famoahambaovaon'ny Global Voices, mpitarika ny zana-tsampana, ary mpikambana ao amin'ny ekipa foibe: mametraka ara-potoana ny tanjona amin'ny antsipirihany ary manaraka ny fivoarantsika ao amin'ny Blaogin'ny Fikambanana. Ao amin'ity lahatsoratra manaraka ity, manolotra ny fandaharany amin'ny ampahany voalohany amin'ity taona ity ny mpanonta ao Azia Atsimo, Rezwan.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, matetika nampiseho fahalianana tamin'ny fahitana ny Global Voices mizara tantara izay mandrakotra lohahevitra momba ny firenena roa na telo ny mpanoratray ao Azia Atsimo. Tsindraindray, nikarakara tantara iray na roa toy izany izahay, fa tsy dia nisy fiantraikany loatra araka ny nirianay izany, na niteraka fientanana be teo anivon'ireo mpikambana hafa ao amin'ny ekipa.
Kanefa, mbola mitoetra foana ilay fahalianana amin'ny tantarana fiarahamiasa. Vao haingana, naseho izy io tao amin'ilay Tranolain'ny Azia Atsimo izay nokarakarainay nandritra ny Fihaonamben'ny Global Voices tany Kolombo.
Toa ilay mpanontan'ny faritra Azia Atsimo, maniry ny hizara ity fahalianana ity eo anivon'ny ekipako aho, izay sady hanome tombony ny mpamaky Global Voices ihany koa satria hamokatra tantara maro mifantoka ao amin'ny faritra izany.
Noho izany, ho amin'ireo telo volana manaraka, te-hitarika ny ekipan'ny mpanoratra ao Azia Atsimo aho mba hamokatra am-piarahana miasa tantara telo na efatra isam-bolana izay manadihady lohahevitra amin'ny fomba fijerin'ny faritra. Ny tolokevitra sasany dia ahitana:
Lahatsoratra mampifandray ny sisintany momba ny fomba ahandroana ny biryanis ao Azia Atsimo
Mozika dimy tsara indrindra an'i Azia Atsimo tao anatin'ny folo taona farany
Fitaovana fanaovana mozika noforonina tao amin'ilay soba-kaontinanta
Mpilalao ‘cricket’ niampitany sisintany
Vondrona mpandala ny maha-vehivavy manerana ny sisintany
Mahery fo ara-literatiora manerana ny sisintany
Fetiben'ny literatiora manerana ny firenena Aziatika Atsimo maro samihafa
Angano zarainay manerana ny sisintany
Lamaody manerana ny sisintany
Inona maha zava-dehibe izany?
Hampiroborobo ny fifankahazoana sy finamànana manerana ny sisintany izany. Mihevitra aho fa ny fikarakarana izany ho toy ny tanjona, indrindra taorian'ilay fihaonambe, dia afaka miteraka fientanana ary mamorona toe-panahy mahery eo anivon'ireo mpanoratra.
Ary koa, hanome fifangaroana lahatsoratra ara-kolontsaina tsara ho an'ny fandrakofanay ilay faritra izany. Matetika dia mifarana amin'ny fanaovana tantara momba ireo tranga ankehitriny mampiray ny loza sy ny korontana izahay, fa mila asongadina koa ny lafiny ara-piainana hafa any amin'ireo firenena ireo.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanoratana
Col·lab·o·ra·tion: Ny fanaovana asa miaraka amin'ny olona iray mba hamokarana na hamoronana zavatra.
Manamaivana ny enta-mavesatr'izay rehetra tafiditra ao amin'izany ny fiarahamiasa amin'ny fanoratana. Raha tokony hiantsoroka ny andraikitra rehetra momba ilay tantara iray manontolo, afaka mifantoka amin'ny famolavolana ampahany manokana izay mifandraika amin'ny tanjaka goavana ananao ianao, na amin'ny fanoratana ny lohateny izany na amin'ny fanoratana ny famintinana, fandalinana ny fikarohana, na fitadiavana sary. Raha toa ka tafahitsoka any ho any ianao na voasakana, ho eo ireo mpiara-manoratra aminao hanome aingam-panahy sy fanomezan-toky .
Amin'ny alalan'ireo fampiharana fifampiresahana momba ilay lohahevitra, manoratra sy miverina manoratra, afaka manamafy fahaizamanao sasany ihany koa izany, toy ny diplaomasia na ny fiarahamiasa anaty ekipa. Ary raha mahomby ilay fiarahamiasa, afaka mizara amin'izao tontolo izao ny hany mba fahaizana sy fomba fijerin'ny mpanoratra maro manerana ny firenena izahay — nakambana ho anaty tantara iray.
Tantara tsy tapaka, fiarahamiasa tsy tapaka eo anivon'ireo ekipan'ny Azia Atsimo
Amin'ireo telo volana manaraka, manantena ny hahita farafahakeliny mpikambana dimy na enina ao amin'ny ekipa Azia Atsimo avy amin'ny firenena maro samihafa mandray anjara ao anatin'ity ezaka ity izahay, ary hizara lahatsoratra iray isan-kerinandro eo ho eo momba ny fiarahamiasa ny sisintany .
Efa nanampy Google Doc iray mandahatra ireo lohahevitra natolotra izahay. Miankina amin'ny fahalianana, afaka manoratra, mandamina, manolotra lohahevitra tantara, na izy telo ireo mpandray anjara. Ny lohahevitra tsirairay avy dia homena mpitarika iray mba handaminana ny dingana famokarana ilay tantara, manomboka amin'ny volana Febroary.
Amin'ny 15 Aprily, rehefa manana tantara maro voazara izahay dia hamorona pejy fandrakofana iray manokana izay hitahiry ireo fampidirana rehetra. Hanaraka ny fomba fihetsik'ireo mpamaky ny tantara zarainay ihany koa izahay.
Ary amin'ny faran'ny volana Aprily, manantena ny hanampy vitsivitsy amin'ireo mpanoratray mandray anjara amin'ny fanoratana lahatsoratra amin'ny blaogy ao amin'ny Blaogin'ny Fikambanana momba ny fiarahamiasa aho.
14 ora izayAzia Atsimo
Miverina indray ireo voromaherimpaty ao Pokhara
16 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy
Ao amin'ny renivohitr'i Azerbaijan, miditra amin'ny ady teknolojika ifanaovan'ny andian-taranaka tsy mitovy ireo mpamily fiarakaretsaka
2 andro izayAfrika Mainty
Fibahanana fidirana : ny fatiantoka ara-tsosialy sy ara-toekarena ateraky ny fibahanana ny Twitter ao Nizerià
4 andro izayAzia Afovoany sy Kaokazy
Misaona ny fahafatesan'ny mpanoratra an-gazety iray i Georgia
05 Septambra 2017Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana